Ukuphupha ipourour Discover ▷️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga parkour. Ngamanye amaxesha amaphupha athetha into eyahluke ngokupheleleyo kumxholo wephupha, kodwa ungawachaza njani amaphupha? fumana impendulo apha.
Kwi-parkour, injongo kukoyisa imiqobo ngoncedo lweentshukumo ezahlukeneyo zomzimba kwaye ukusuka ku-A kuye ku-B yeyona ndlela imfutshane. Olu hlobo lwekhosi yesithintelo lwenziwa ngakumbi kulutsha nakubantu abadala.
Imbaleki yokupaka kufuneka ifumane kwaye iphuhlise indlela yayo yokuhamba kangangoko kunokwenzeka ngexesha lomsebenzi wakhe uyilo: Akukho mida kubuchule bokuyila; Ukongeza kulawulo olufanelekileyo lomzimba womntu, amandla ayafuneka.
Umdlalo waqulunqwa ngeminyaka yoo-1980 kwaye uqhutywa ikakhulu ezixekweni, kodwa unakho ukwenzeka ngaphandle. Iimbaleki ziyaxhuma zize zinyuke iindonga okanye iziqu zemithi, zenze isiqingatha okanye ukujika okupheleleyo, zenze i-somersault, okanye ibhalansi. I-Scaffolding kunye neendawo zokudlala zibonelela ngendawo efanelekileyo yoqeqesho. I-Parkour ngumxube wokubaleka, wokuzilolonga phantsi, kunye neziqwenga.
Isibindi sokutsiba kuphahla lwendlu okanye ukujinga kuphahla olulandelayo sikufutshane nomdlalo ogqithileyo onokuphela ngokonzakala okukhulu, amathambo owaphukileyo okanye nkqu ukufa. Kuqeqesho lweminye imidlalo okanye izifundo zemidlalo esikolweni, ulwelo kunye nokulandelelana kwendalo kokuhamba kuhlala kukhuthazwa ngepaki.
Ukuba umntu uphupha i-parkour, mhlawumbi ungumdlali onomdla. Mhlawumbi ungathanda ukuhamba ngale ndlela ingaqhelekanga ngenye imini, kodwa awukafumani thuba. Ukutolikwa kwamaphupha kubaluleke ngakumbi ukuba zeziphi iingcinga kunye neemvakalelo umntu oleleyo azidibanise nephupha.
1 Isimboli yephupha «iParkour» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iParkour» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iParkour» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «iParkour» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, isimboli ethi «Parkour» imele ubunzima kwindlela leyo iphambi komphuphi ngombandela othile. Ukufezekiswa kwengcinga okanye ukuphunyezwa kweminqweno yomntu kuvavanya umonde wakho. Iphupha likwazisa ukuba kunokubakho ukuphoxeka okukodwa okanye okubini.
Ukubaleka kwi-parkour kunokutolikwa njengokulahleka mathuba ukuba umphuphi uye waqonda ngoku. Ngokuya kuhlalutyo lwesiko lamaphupha, umntu ophuphayo uzama ukulisebenzisa eli thuba. Iphupha likwabonisa ukuba umntu oleleyo akufuneki enze ngokungxama kwimeko ethile.
Ukuba ufuna ukuqala ukwenza ipourour, kodwa awukwazi ukuhamba ephupheni, awuyi kufika naphi na kwinyani. Inqanaba lokuma liyamkhathaza umntu ophuphayo, kuba enyanisweni ixesha elide wayefuna ukuzifumana ekwintsapho ebhetele okanye kwizikhundla zobungcali.
Ukutolikwa okuxhaphakileyo kwamaphupha, kukwabalulekile ukuba umphuphi ujongane njani nepaki. Ukuba uhamba ngesantya, ukuzithemba kunye nokucinga, uphawu lwephupha luthembisa a ukukhuthazwa ngokukhawuleza nangobungcali. Ukuba umntu oleleyo uyalala kwaye wenzakele kakhulu kukuwa, umfanekiso wephupha u "Parkour" ulumkisa ukuba kufuneka kuthathwe inkathalo enkulu kunye neziganeko.
Okukhulu umqobo ephupheni, kokukhona ngocoselelo umphuphi kufuneka aqhubeke ekuphumezeni izicwangciso zakhe. Umngcipheko "wokutshona nzulu" kunye nokufumana ingozi ebomini uyanda ngokufanelekileyo.
Ukuba umntu ophuphayo ujonga iimbaleki zepaki, otyibilikayo okanye awe aze awe, lo mfanekiso uphuphayo uzisa rhoqo ilahleko yalowo uleleyo. Kungenzeka, umzekelo, ukuba umntu ochaphazelekayo ulahlekelwe sisixa esikhulu semali. Ukuphakama apho umntu awela khona ephupheni kubhekisa kubungakanani okanye kuluhlu olulahlekileyo.
Uphawu lwephupha «iParkour» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwengcaciso yohlalutyo lwamaphupha, ipaki kwindawo yokuphupha luphawu lwezithintelo umphuphi ekufuneka oyise ebomini bokwenyani. Kusenokubakho ukumelana kulo msebenzi ngokuchasene nezimvo zakho, ezivakaliswe ngokuthuka okanye udonga kwiphupha lepaki.
Isimboli yephupha isenokubonisa ukuba umntu ophuphayo kufuneka angakuhoyi ukuzithandabuza ukuze akhule ngokomoya. Indlela umphuphi ajongana ngayo nomdyarho wepaki ibonisa iindlela ezinokubakho ukusombulula iingxaki ngokwenene. Emva kokuvuka, kuya kufuneka ucinge kwakhona ngokuchanekileyo ukuba woyise njani umqobo ephupheni: Ngaba ukutsiba okanye intshukumo ethile iyimfuneko?
Kwelinye icala, ukuhamba ngokukhawuleza ngexesha le-parkour kunokubonisa ukuba ukulala okwangoku kukwisigaba soxinzelelo kwaye awukwazi ukuphuma xa ulele. Uyabaleka ". Kwelinye icala, iphupha liquka ukuzithemba kunye namandla osondela kuwo kwinjongo ethile.
Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, ikwabonisa ukusebenza komntu oleleyo. Yonke into ebomini bakhe ihamba kakuhle.
IParkour ngumdlalo apho kuye kufuneke ukuba kugcinwe ulungelelwaniso; kungenjalo inokuwa. Uhlalutyo lwengqondo lwamaphupha, oku kuthetha ukuba umntu ophuphayo uzama ibhalansi umntu wakho wangaphakathi. Izabalazela ukuhanjiswa kokukhetha okuhle nokubi. Nangona kunjalo, isimboli yephupha ilumkisa ukuba ukulinganisela okungaphezulu komlinganiswa kunokubonwa njengokukruqula.
Uphawu lwephupha «iParkour» - ukutolika kokomoya
Ipaki ibonisa ngokuchazwa kwephupha lokomoya ekufuneka liphuphile hambisa ukuqhubeka nokukhula ngokomoya. Ukulawula imiqobo kulo mdlalo kubonisa ukuzimisela apho umntu ophuphayo ephawula umendo wakhe kaninzi.